ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ပျမ်းမျှပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် (အင်္ဂလိပ်: Mean sea level; MSL) (ပုံမှန်အသုံး: ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်) ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာ့ရေထု မျက်နှာပြင်တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုမိုသော ရေမျက်နှာပြင်များ၏ ပျမ်းမျှအမြင့်တစ်နေရာကို ဆိုလိုပြီး ထိုရေမျက်နှာပြင်မှ အမြင့်များကို တိုင်းတာလေ့ရှိသည်။ ကမ္ဘာသုံး ပျမ်းမျှရေမျက်နှာပြင်သည် ထောင်လိုက်အမှတ်တစ်နေရာဖြစ်၍ စံအားဖြင့် Geodetic datum (ကမ္ဘာ့နေရာများကို တိတိကျကျတိုင်းရန်အတွက် ရည်ညွှန်းဘောင်) ဟုခေါ်သည်။ ထိုရည်ညွှန်းဘောင်ကို ရေကြောင်းပြဇယားပါ "ရေ၏ အနက်ပြခြင်း" (chart datum) အဖြစ် မြေပုံရေးဆွဲခြင်း၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းပြခြင်းတို့တွင် သုံးကြသည့်အပြင် လေကြောင်းတွင် "စံပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်" အဖြစ်သုံးစွဲကြသည်။ အမြင့်နေရာ၊ လေယာဉ်၏ ပျံသန်းနေသောအမြင့် စသည်များကို သတ်မှတ်ရန် လေထုဖိအားကို စံသတ်မှတ်ထားသည့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နေရာ၌ တိုင်းတာကြသည်။ ပုံမှန်နှင့် လွယ်ကူသည့် ပျမ်းမျှပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် စံသတ်မှတ်နည်းမှာ နေရာတစ်ခု၌ "ပျမ်းမျှ ဒီရေအကျနေရာနှင့် အတက်နေရာ၏ အလယ်မှတ်ဖြစ်သည်။
ပင်လယ်သေ နှင့် ဂျေရုစလင်မြို့ကြား တည်ရှိသော ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပြ အမှတ်အသား။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကို များစွာသောအချက်များက အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး ဘူမိဆိုင်ရာ အချိန်စဉ်ဆက်ပြသမှုစနစ်အရ ကြီးမားသော ရေမျက်နှာပြင်အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။ သို့သော်လည်း ၂၀/၂၁ ရာစုများတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းများကြောင့် ရေမျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲသည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ထိုရေမျက်နှာပြင်အပြောင်းအလဲကို ဂရုတစိုက်တိုင်းတာခြင်းများသည် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းများအကြောင်းကို ပို၍သိရှိစေနိုင်သည်။
"ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်" (above sea level) ဟူသော ဝေါဟာရလည်း ရှိသေးကာ ယေဘုယျအားဖြင့် "ပျမ်းမျှ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက်" (AMSL) ကို ဆိုလိုပေသည်။ ထို့နောက် အသုံးတစ်ခုရှိသေးပြန်သည်။ "မျက်မှောက်ခေတ် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက်" (Above Present Sea Level) ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြစ်ပြီး အတိတ်နှင့် ယနေ့ခေတ် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်များကို နှိုင်းယှဉ်ပြသပေးသည်။
↑ USGCRP (2017)။ Climate Science Special Report. Chapter 12: Sea Level Rise. Key finding 2. (in en)။
↑ The strange science of melting ice sheets: three things you didn't know။ The Guardian (12 September 2018)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်&oldid=663563" မှ ရယူရန်
၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၀၅:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၀၅:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။